Qunfeng Okrelekrele Machinery Co., Ltd. yafakwa ngo-1995 yaye lizimisele ukuqhubeka uphando, uphuhliso, ukwenziwa, usasazo kunye nenkonzo koomatshini izinto zokwakha ezifana umgca ekwenziweni block eziphathekayo, AAC block umgca imveliso kunye nonyango inkunkuma zokwakha noomatshini. Iminyaka engaphezu kwama-20 kwiinzame rhoqo ngokulwela ukuba bafezeke kuphuhliso kunye nemveliso, inkampani yethu ibonelela ishishini lokwakha yomhlaba isiseko yesixhobo zokuphucula core ukhuphiswano yabo combing ngokugqibeleleyo ingcamango "ubugcisa ekrelekrele" kunye ingcamango "kahle eliphezulu kunye nokusingqongileyo friendly ".
I-Global Innovation System
Sisoloko ukuthatha ukukhuthaza uphuhliso isixeko kunye nobugcisa ekrelekrele. Njengoko repsonsibility yethu engundoqo / R & D yethu zobugcisa taskforce iquka 100 abaqeqeshiweyo kwiinkalo ezifana mechanical, hydraulic elektroniki kunye nokwakha eziphathekayo,. Siye wamisa amaziko amabini ophando kunye kwimvumelwano yentsebenziswano elungileyo enobuchule ezininzi neeyunivesithi abadumileyo Chinese kunye namaziko ophando. Siye ithathe inxaxheba ekuqulunqweni kunye nokulungisa abangaphezu kweshumi imigangatho yesizwe mveliso iimveliso. Siye baphumelele ngaphezu kwesinye kwama-200 ukuze fyabo, eluncedo kunye noyilo kwakunye apreyizali emithathu yephondo impumelelo zobugcisa.
Jikelele manfacturing System
Nge-mali zizonke RMB million 45, Qunfeng ukuseka 'Fujian Qunfeng Machinery Co., Ltd.' kwaye 'Industrial Park Qunfeng' e Nan'an Binjiang izixhobo isiseko sokuvelisa ngo-2008, nto leyo eye waqalisa kraca kwexesha elitsha ezikrelekrele. Le paki kwimizi ithatha ezingama-215.000 square metres kunye indawo neyophahla mali jikelele kwi 145.000 square metres. Ukuthatha ithuba amandla alo zemali womelele, Qunfeng uqalise iintlobo ezahlukeneyo izixhobo ekhaya naphesheya phambili imveliso kuquka iziko CNC processing, ukuwelda robot, izixhobo unyango ubushushu ngokupheleleyo-nokuhambisa, umatshini laser ukusika kunye CNC umatshini plasma ilangatye-ahlabayo. Nge ezintsha rhoqo, intsebenziswano kunye nabathengisi ngamazwe, nokuhlanganiswa izixhobo ezikumgangatho ophezulu jikelele, Qunfeng ibeyinto, zeteknoloji kunye eco-friendly uvulindlela okrelekrele entsimini China izinto zokwakha noomatshini kwintsimi eyilwe ngayo imveliso emihle ophezulu, anamandla umgangatho imveliso enamandla kwakunye yenkonzo yokuzinikela nangokunyaniseka.
Njengoko ishishini umfuziselo of China izinto zokwakha oomatshini, Qunfeng ibonelela oomatshini ukunyusa kwaye ezikumgangatho ophezulu kunye nobugcisa okrelekrele kubathengi babo. Ukugubungela amazwekazi amathandathu kunye nezikhululo inkonzo phesheya 7 no-24 ii-ofisi zasekhaya, Qunfeng uye wakhonza abathengi 8000 abavela kumazwe 110 nemimandla izixhobo ngakumbi kakuhle lemveliso ekrelekrele. Qunfeng kundenzele igama elihle kakhulu ehlabathini kunye neemveliso zayo kokuba zithunyelwe emarikeni-kwinqanaba eliphezulu ehlabathini, iquka Asia, eYurophu, Umzantsi Melika, iOceania, Afrika kunye nomNtla Melika.
Ngexesha zophando ngonyaka ngaphezulu kwama-20 ngokwenzululwazi kwaye kuqhubela phambili, Qunfeng usoloko ozaziyo uxanduva lwentlalo ifumene ukunconywa kunye nenkxaso evela kurhulumente kunye noluntu kunye nemimoya zalo "Ingqibelelo, Innovation, Ucikizeko kunye neNtsebenziswano". Qunfeng ithabathe iintlobo ezahlukeneyo izitifiketi kuquka inkqubo esemgangathweni yolawulo, inkqubo yolawulo lwendalo esingqongileyo, OHSMS, IPMS, ulawulo lwemveliso ukhuseleko emgangathweni kunye nezixhobo wesizwe kunye nolawulo lomgangatho nezixhobo. Qunfeng iye yaphumelela amaqashiso yamabhaso, ezifana "National itotshi Inkqubo Key High-tech Enterprise", "National Intellectual Property Pilot Unit", "Enterprise yePhondo kakhulu kwaye Innovative", "Engineering Technology Research Centre of Provincial eziphathekayo zokwakha Ndiyila Enterprises", "Famous Provincial Uphawu", "Famous Provincial Brand Products", "Provincial Well-eyaziwa Enterprise", "International Provincial Famous Brand", "Product Abathengi-ulwaneliseko wePhondo 'yaye' kweefektri kunye Informatization oluHlangeneyo Model Enterprise".
Honors nokulindelekileyo, Qunfeng uya kuqhubeka inyanzelise kwixabiso engundoqo yokudala kwikamva yezobuNtlola kunye Innovation, nasekuzalisekiseni uthumo enkulu yokwakha isixeko eziphilayo ngokukhalipha kwanokwakha uluntu yokusingqongileyo-friendly yobuchwepheshe.